Eduga ntupu Nebulizer Manaufacturer
Aerosol Performance nke mini Air 360
Aerosol Performance nke AeroCentre
Aerosol Performance nke Air Nkpuchi
Aerosol Performance nke Air Force
Aerosol Performance nke Air Angel
Feellife Health Inc is an international enterprise specializing in researching, developing, manufacturing and marketing of portable mesh nebulizers. Our vision is to provide the 3rd way of dosing for human beings. FEELLiFE ka mụtara isi technology nke nebulizer-abụọ titanium ONE mgbawa. Anyị nwetara ihe karịrị 10 Ikike nchọpụta Kemịkalụ na n'ụwa nile, gabiga ISO 13485 na CFDS asambodo. Anyị na-eduzi mmepụta nditịm na zuru nnabata ya na ụkpụrụ nke OA na FDA. Anyị na ngwaahịa na e ọma na-ere ka ihe karịrị mba 50 na FEELLiFE na-tozuru oke dị ka ndị kasị pụrụ ịdabere na soplaya nke ntupu nebulizer.
R & D ahụmahụ 9 afọ
Ntupu nebulizer usoro 20+
International nchọpụta Kemịkalụ 10+ nchọpụta Kemịkalụ
isi na nkà na ụzụ
ụlọ ọrụ mmepụta ihe TOUR
Ị dị njikere ịtụ ntupu nebulizers?
FEELLiFE kwere nkwa na ị na-elu-edu ngwaahịa na echiche ahịa ọrụ.
-ahụ niile na ngwaahịa
Zuru okè na jụụ! Na-eji nwere ọgba dị ka a na-arụzi ụgbọala ikuku Compressor nebulizer. Nke a bụ a ụwa nke dị iche. Na-arụ ọrụ ọma, obere na obere na-ekwupụtakwa ọtụtụ agwọ ọrịa tupu i nwere fanye batrị.
Oké adaba, ihe fọrọ nkịtị m enwe ike iji ya na m oche na m ọrụ na-enweghị na-enye nsogbu ọ bụla. Na-arụ ọrụ dị ka nke ọma dị ka m nnukwu Compressor nebulizer. Na-arụ na ụgbọelu. N'Aka dịruru. Easy na-n'aka iji ọ bụla. Ọ dịghị otu mkpesa. Nwere ike ikwu !!
M ji a nebulizer maka a obere n'okpuru a ọnwa na otú anya m nnọọ obi ụtọ na ya. Ọ nebulizer ngwa ngwa na-adịghị achọ ka ị na-mgbe niile na-eji dochie batrị. Ọ dị mfe ikwu na iji a ọkọlọtọ USB cable. Ọ dịkwa mfe ọcha. Ọ na-abịa a otu afọ akwụkwọ ikike. Olileanya m na-agaghị akpa ya.
Nke a ígwè e-atụ aro site anyị ọtọ na nkà mmụta ọgwụ na dọkịta na-emeso mbipụta mere site ala ala ebu ikpughe. Ọ na-ekwu na-ahụkarị nebulizers dị adịghị anapụta na nkà mmụta ọgwụ dị ka nnọọ n'ime akpa ume. Anyị na-enwe ezigbo ahụmahụ na ọ dị.
M zụtara a mama m na iwu onye na-ata ahụhụ si na ụkwara ume ọkụ ya dum ndụ. Ọ bịara na a nnọọ mma mkpọchi uwe akpa na-eburu ya gburugburu mfe. The ngwaọrụ onwe ya na-ọma mere. Nnọọ ezigbo ihe n'èzí. Ga-ikwu!
Wee na a maka njem. N'ezie arụ ọrụ dị ukwuu.
Obi ụtọ na ahịa
Kwadoro site na ihe karịrị 4000 ahịa atụkwasị anyị obi ruru ha magburu onwe ahịa ahụmahụ.
Afọ R & D Ahụmahụ
iberibe / ụbọchị
Series maka nhọrọ
Recents Atụmatụ & News
ele ihe post +
Mmezi & Nkwado